IJapan Bobtail, ikati laseMpumalanga elinobudlelwano futhi elinothando kakhulu Amakati kaNoti
IJapan Bobtail, ikati laseMpumalanga elinobungane futhi elinothando kakhulu
Yize igama lizwakala lixakile kuwe, impela uma ungumthandi wamakati uzobe uke wabona noma wezwa ngalolu hlobo oluyinqaba. Kwezinye izifundazwe ezisenyakatho yeJapan, baziwa njenge- amakati anenhlanhla. Lapho babe uphawu lwekati elidumile le-tricolor elizungeze umhlaba wonke, i- UManeki-neko, ikati eliphakamisa isidladla sangaphambili liyihambise kube sengathi liyaqhweba.
El I-bobtail yaseJapane Ngoboya obuhle futhi obuthandekayo obungaphila ngokuphelele efulethini, ngoba izidingo zalo zokuzivocavoca aziphakeme njengalezo zeBengal. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngalolu hlobo oluhle? Ungayeki ukufunda.
1 Umsuka nomlando weBobtail yaseJapan
2 Izici zomzimba
3 Ukuziphatha nobuntu
4 Ungayinakekela kanjani ikati laseJapan iBobtail?
5 Inganekwane yeBobtail yaseJapan
Umsuka nomlando weBobtail yaseJapan
Yize imvelaphi ingakaqiniseki, kukholakala ukuthi wafika ezwenikazi lase-Asia eminyakeni engaba ngu-1000 edlule. Umbono owamukelwa kakhulu uthi udabuka eziqhingini zaseKuril, nokuthi kumele ngabe ufike ezweni laseJapan ngesikebhe.
Cishe ngonyaka we-1602 ukuthenga, ukuthengisa noma ukugcina ikati le-bobtail kwakwenqatshelwe eJapanNoma ngubani owatholwa kwakudingeka akhululwe ukuze inani lamagundane elithinta imboni yelayisi nosilika ligcinwe likhona. Ngemuva kokuxazulula le nkinga engathi sína, la makati aba ngamakati ayizithonjana ezweni.
Ngo-1968 u-Elizabeth Freret noLynn Beck babazisa eMelika, lapho babengafika khona eYurophu nasemhlabeni wonke.
I-bobtail yaseJapane ikati eliphakathi nendawo elibonakala ngalo umsila omfushane Inesimo esihlukile sokugoqa isikulufu sikakhokho, kodwa simile ngendlela eyisicaba. Uma uyibheka ukude, kungenzeka ukuthi ibukeka njengebhola lezinwele eliqhayisayo, kepha eduze, uzokwazi ukuhlaziya ukubukeka kwayo okuhle okwenza ukuthi ikhetheke kangaka.
Ikhanda kufanele lenze unxantathu olinganayo, nezindlebe namehlo aqhelelene. Imilenze yayo iqinile futhi iyasubatha. Kwakhe umzimba uzacile futhi unemisipha, futhi ivikelwe ungqimba lwezinwele ezingaba zinde noma zibe mfushane.
Inesisindo cishe 4kg kanye nesikhathi sokuphila se- iminyaka 18.
IBobtail yaseJapan ibonakaliswa ngokuba iyasebenza impela futhi iyazijabulisa; Eqinisweni, yize wonke amakati enelukuluku lokwazi futhi ekhuthele, angaba njalo kakhulu, kangangoba aze alale kancane kunamakati amaningi anoboya.
Ivumelana kalula nesimo esisha noma isipiliyoni. Ngendlela efanayo, ivumelana kahle nenkampani yabantu abasha nezinye izilwane, ngakho-ke ngeke kube nankinga uma kufanele uhambe uyishiye kwenye indawo ngenkathi ubuya. Unothando olukhulu futhi uyadlala, okwenza abe inkampani enhle kakhulu.
Ungayinakekela kanjani ikati laseJapan iBobtail?
Kunemikhiqizo eminingi yokuphakelayo enconyelwa kakhulu iBobtail yaseJapan., njenge-Acana, i-Orijen, i-Ownat engenakho okusanhlamvu, noma iTaste of the Wild. Zonke lezi zinesici esifanayo: azinakho okusanhlamvu, kepha zinenani / inyama yenhlanzi eningi, ngakho-ke ngaphandle kokungabaza ubuka bakho bungakhula kahle nentuthuko, kanye nokugcinwa kahle.
Nsuku zonke kubalulekile ukuyixubha ukuze kungabi nokungcola. Ngaphezu kwalokho, kufanele uqiniseke ukuthi womabili amehlo nezindlebe kuhlanzekile, ngoba uma kungenjalo kungaba uphawu lokugula.
Ngokuvamile iyikati eliphilile impela, kepha kungenzeka izinwele zamabhola. Ukugwema lokhu, ngaphezu kokukuxubha nsuku zonke, kunconywa kakhulu ukuyixubha nsuku zonke I-FURminator, okuyikama elisusa cishe zonke izinwele ezifile, lifake okuncane imithombo yamakati esidladleni sayo kanye ngosuku.
Inganekwane yeBobtail yaseJapan
Le furry yinhle, akunjalo? Uma usafuna ukwazi kabanzi, sizokutshela eyodwa inganekwane yaseJapan okuphathelene nalolu hlobo. Utshela ukuthi ngobunye ubusuku basebusika ikati lalilele eduze komlilo. Ngesikhathi ephumula, umsila wakhe waqala ukusha.
Lapho ethola lokho, wethuka kakhulu futhi wagijimela kulo lonke idolobha esakaza amalangabi, okwenza izindlu eziningi zaya emlotheni. Ngemuva kwalokho, u-Emperor wayala ukuthi asike imisila yawo wonke amakati ukugwema amashwa amaningi.
Njengakuzo zonke izinganekwane, kukhona okuthile okuyiqiniso nokunye okungekho. Kulena ethile, kungenzeka ukuthi kube nomlilo edolobheni noma esigodini, kodwa asikholwa ukuthi kubangelwe ikati. Noma kunjalo, lolu hlobo oluhle luyisibalo nobani ngokuqinisekile uzochitha iminyaka eyi-18 enhle kakhulu yempilo yakho 😉.
Uma kungakhathaleki ukuthi ucabanga kangakanani ngakho, ufuna ikati laseJapane iBobtail ukuthi libe yingxenye yempilo yakho, ngikutshele ukuthi intengo yomdlwane iseduze I-500 euro. Leyo ntengo ingaba ngaphansi uma uzoyithola esitolo sezilwane.
Ukuze siqede, sinamathisela uchungechunge lwezithombe zeBobtail yaseJapan, enye yezinhlamvu ezinhle kakhulu:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » IJapan Bobtail, ikati laseMpumalanga elinobungane futhi elinothando kakhulu
Ikati lezemidlalo lase-Arabian Mau
IJavanese, ikati elithandeka kakhulu